Qacceessa Wallee Jaamboo Jootee Araara ABO fi OPDO ilaalchisee Kichuu
HomeAfaan OromooNewsQacceessa Wallee Jaamboo Jootee Araara ABO fi OPDO ilaalchisee
Qacceessa Wallee Jaamboo Jootee : Araara ABO fi OPDO ilaalchisee
Yeroo hamtuu ture. Shira hamaan xaxamee ABO uummata keessaa baasuuf holola “Paartilee Oromoo hundi araara fudhatee Qawween utuu hintaane karaa nagaan, tokkummaa uumanii rakkoo furuuf walii galteerra gahanii ABO’n dide” jechuun holola qindeeffamaa jiru keessatti Wallee cigoo ajaa’ibaa wellise. Wallee sana wellisuuf yeroo jedhu ayyaanni irreechaa fuulduratti kalaalamee ture. Wallee “Addaan Baanee hinafnu yaa jigaakoo” jechuun wellise.
Sirba sana keessatti buufata jalqabaan
“Addaan baanee hinafnu yaa jigaakoo
Sirras eenyu naa beeka gubaakoo
Kan darbees amma dhiisi sitti hinkaasuu natti hinkaasin
Wanta yeroon nu goote san yaaddee sammuu hingaabbin” jedhe.
Buufataaleen olii badii OPDO’n waggaa dheeraa dura balleessaa ture mara ABO’n dhiifama godheefii OPDO’s ergamtuu ta’uu jalaa baasuuf yaada akeekudha. Rakkoo akka sabaatti qabnu kan cimsee hubatuuf, gubaa Oromoo kan beeku ABO qofa ta’uu sirba ibsudha. Abdiin uummataas ta’ee abdiin OPDO dhaaba Oromoo ABO/WBO ta’uu ibse.
“Waan Bonni gokse Gannatu jiisaa
Du’een bada malee yooman si dhiisa
Barris dabareedhaan nama geessii
Yoo rabbi jedhee”
Jechuun wellise. Bo’iin lammataa kun badii kanaan duraaf waan waliin taanee fuulduratti hojjennutu sirreessa, dhiifama kanaan dura OPDO’n balleesses waan ABO waliin ta’ee fuulduratti furmaata uummata Oromoo Bilisummaa sabichaaf hojii duratti hojjennutu dhiifama taasisa ergaa jedhu qaba. Madaa kanaan dura TPLF waliin ta’uun OPDO’n Oromoo madeesseef qorichi walii galtee araaraa sana ta’uus bo’ii akeekudha. Bo’iin kun abdii guddaan araara ABO fi mootummaa Dr. Abiyyi gidduu irraa akka qabu kan ibsudha.
Ceesisa itti aanuun
“Barri indarba na eegii gadaatu kan milkiitii
Belban nu fura yoomuu, hir’uun barana guuttii
Waliif galla kuulleetu wal dhabni nama miitii
An nan dhufa na eegii Irreecha baraanaattii
Waaqeffanna galleetuu Malkaa hora har-sadiittii
Waan jirtu numatu hiikaa anaaf suma wal beekaa” jedha
Icciita guddaatu as keessa jira. Wallee Jaamboo kana keessa icciitiin jitu icciitii biyyaati, icciitii qabsaa’ota Oromoo, icciitii dabaaf Shira qabsoo Oromoo irratti xaxamaa ture Kan beeku ABO fi qaama Shira xaxaa ture OPDO ta’uu akeeka. Shira sanammoo OPDO’n eenyu akka hojjechiise himee ABO waliin ta’ee diina innikaa ykn Nafxanyaa waggaa 150 oliif Oromoo cagadaa ture dhabamsiisuun waliin hojjechuuf kan akeeku ta’uu ibsa. Bo’ii kana keessatti ABO bakka bu’ee wellise. ABO’n Irreecha baranaa irratti ifatti mul’atee akka bahee irreeffatu, araarri ABO fi OPDO gidduutti bu’ee ayyaana Irreechaa waliin kabajuuf ABO’n gammachuu qabaachuu isaa ibsa. Xaxaa waggoota 28 keessa xaxamaa ture OPDO’n sirriitti kan beektu ta’uu fi qabsaa’ota bakki buuteen isaanii dhaabamee jiru kan ABO’n himatu eessa buutee isaanii OPDO’n kan beeku ta’uu fi Sana ammoo waliin furuuf waliin hiikuuf abdiin jitu araara dhugaa milkaa’u sana ta’uu sirba akeekudha. Sirni sun araarri kan milkaa’u taanan OPDO’n illee uummatni Oromoo badii isaaniif dhiifama kan godhu ta’uuf daangaan yakka raawwatamaa turee ABO waliin ta’uun nageenyi Oromoo nii mirkanaa’a Hawwii jedhu qaba.
Akkasuma OPDO’n waan hidda Oromummaa qabaniif sirnicha keessatti jibbamaa jiraachuu kan ibsuu fi ABO’n ammoo abshir si bira gaheera ergaa jedhu dabarsaa kan jirudha ture. Rakkoo jiru iccitumaan waliin hiikna jedha. Kun walii galtee ABO fi OPDO yeros Asmaraatti taasisan icciita ta’aa isa ture sanallee bakka bu’a.
“Jirtuu yaa mammagaallan koodee tiyya
Yaa jaalala ijoollummaa kan biyyaa
An amma si arguunkoo waan hinoollee
Nan dhabe dachiirraa kan si caalee
Waan na dhukkubus an nan wal’aalee
Gad jedhe gaaffiidhaan lafa ilaalee
Bakkalchi dhugaa mumul’achaa jira
Barri dukanaa suni darbeeraa
Eentu hangakee natti dhiyaataa
Arge firrikoo suma ijibbaataa
Lafti haa fagaatuu
Rakkinni haa jabaatuu
Anaaf si argachuurra humtuu hincaaluu
Rabbi yoo jedhe galli hinoolu
Kotteechi bakkee hinbulu
Egaakoo galli hinooluu
Kotteechi bakkee hinbuluu
Qallookoo galli hinooluu
Asiif Achi hinilaaluu
Dhabeera kan si caaluu”
Buusaan walaloo sirba Jaamboo olii kun ergaa jajjabaa qaba. Kuush magaalinaan beekamu. Magaalinni Kuush kan fokkisu utuu hintaane magaalina nama addunyaa kanarraa bareedu, simbo qabeessa uummataati. Kuush keessaayyuu ammoo Oromoon isa hangafaa yoo ta’u; Wallee kana keessatti Jaamboo Jootee dhaaba uummata Oromoo ABO bakka bu’ee Oromoof dhaamsa dabarsa. Dhaamsi kun ammoo dhaamsa ABO’n dabarsu yeroo sanaati. Biyya keenya Oromiyaa keessatti hogganni ABO caasaa qaba, caasaa isaa kanaaf kabajaa Addaa qaba, kabaja qabuufis Jaala jedhee waama. Biyya Oromiyaa galuuf qophaa’aa waan jiruuf jaallan isaa Oromiyaa arguuf waan jiruuf ABO’n gammadaa jiraachuu hubachiisa, akkasuma biyya wareegama kaffalaafii jiru Oromiyaa arguuf waan jiruuf “Yaa jaalala ijoollummaa kan biyyaa” jedhee ABO bakka bu’ee hangam akka ABO’n Oromiyaa jaallatu fi dachee kanarraa ABO’n Oromiyaa caalaa waan jaallatu akka hinqabne ibsaa, Hawwii ABO’n Oromiyaa arguuf qabus lafa kaahe. Eenyuu ol ABO’f kan yaadu biyya isaa Oromiyaa fi saba isaa Oromoo ta’uus ABO bakka bu’ee yaada isaa ibseef. Rakkinni fi gaddaaf gadadoon jiraatus abdii fuulduratti rakkoo kana keessaa Uummata isaa Oromoo fi biyya isaa Oromiyaa baasuu qabaachuu ABO’s lafa kaahee jira. Suma argannaan na gaha, kaan sii guutuuf anuu jira yaada jedhu Jaamboon ABO bakka bu’ee dubbate.
Asiif achi hinjedhu abdii dhumaan na eegi galeen si faana rakkoof gidiraa argaa jirtu dhamdhamaa ergaa jedhu ammoo hoggana ABO bakka bu’ee dabarsa.
Ceesisa itti aanee jiruun ammoo
“Gargar baanee hinafnu yaa jigaakoo
Simalee eenyus naa hinbeeku gubaakoo
An amma wantan yaade icciitaadhan sitti odeessee
Hinabbisu rakkoon kun ana tiruukee biyyaa baase” jedha
Ergaa kanaanis ABO bakka bu’ee Jaamboo Jootee OPDO’f dhaamsa dabarse. Yeroo sanatti ABO fi OPDO ija obbolummaa haqaatiin ta’anii haasa’an, Sana karaa Lammaa Magarsaas karaa HD ABO Jaal Daawud Ibsaas Oromummaaf wal ta’uu fi hoggana ABO’s icciita isa biyya hanbaatti rakkisaa jiru himeeraaf. Isa kana ibsuuf icciita kiyya si tiruukoottin hime jedha. ABO’n biyyatti keessatti dhaabbilee sirna EPRDF keessaa qaama abdatu OPDO qofa ta’uu kan ibsudha. Akka sirnichaatti tiruunkoo sidha jedhee ergaa garaa namaa hammeessu kan kaasudha.
“Namatti na hiniminii an nan dhufa qarreettii
Barii yoo iyya Handaaqqoo, afoo lafa bariittii
Bar-meeqa wal sakaallee wal ilaalla akka halaagaattii
Natti hirkadhu qalloo koo nu gaaddisa waliitii” jedha.
Ceesisa olii kanaanis ABO bakka bu’eetin kan Jaamboo Jootee wellise. Ceesisa kanaan ABO fi OPDO’n akka halagaatti wal ilaaluudhaan, dhugamatti ammoo OPDO’n akka halagaatti uummata miidhaa turuu kan ibsudha. Isa kana ammoo ammaan booda atis dhiisi anis dhiisee nagaan uummata keenya Oromoo gara hawwiif qabsoo isaa galmaan gahuutti waliin hojjenna ergaa jedhu ibsee, OPDO’n ammoo gaaddisa kan ta’eef ABO qabaachuu fi ABO’n illee OPDO akka duriitti ilaaluu dhiisee OPDO’n illee badii uummata Oromoo irratti raawwachuu dhiisee waliin hojjechuudhaan waliif utubaa ta’uu kan ibsudha.
Qe’ee itti guddanneetti” jedha. Kana jechuun ABO fis ta’e OPDO guutuutti Oromoof bara gammachuu kan ta’u milkaa’u araara ABO fi OPDO ta’uu kan ibsudha.
Walumaa gala sirbicha kessatti mariin ala, jibbaaf hammeenyaan rakkoon akka hinfuramne ibsuudhaan wallee yaada ajaa’iba dabarsudha.
Hubachiisa: Wallee kana fedhiif ayyama #Jaamboo_Jooteen ala akka ofiikoo hikkaadhettin hiikee barreesse
Kan Dawwitee Mokonnon itti aanseen hiikuu yaala.
OROMO MUSIC 2019- Jambo Jote – kan garaa garaattu beeka—–
Birhanie Beka Geleto (Hiriira DC) waliin Marii Bilisaa